Vanhu Vokurudzirwa Kuvhenekwa Gomarara repaZamu
Apo nyika dzepasi rose dziri kucherechedza mwedzi waGumiguru, unova mwedzi wekucherechedza chirwere chegomarara repazamu, kana kuti Breast Cancer Month, vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti havana mari dzinodiwa kuti varapwe chere ichi.
Amai Laina George, avo vanogara kuMarondera, vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kushambadzwa mwedzi uno kuitira kuti vanhu vave neruzivo, dambudziko riripo nderekuti madzimai akawanda anotadza kunorapwa nepamusana pekuti vanenge vasina mari dzinodiwa kuti varapwe.
Amai George vanoti vakazobatsirwawo neimwe mhuri kuti vaitwe oparesheni yokubvisa zamu rekuruboshwe gore rakapera, asi dambudziko ravave kusangana naro nderekuti havasisina mari yokuti vapiswe pakabva zamu kuitira kuti gomarara ribve raparadzwa zvachose.
Amai George vanoti madzimai akawanda ari kufira mudzimba nokuti chero zvazvo vamwe vacho vakavhenekwa mazamu iwaya pasina muripo mumazuva eBreast Cancer Month, vazhinji vavo havana mari yokuti varapwe.
Dambudziko rakatarisana naAmai George, idambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda munyika.
Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana siyana kuCancer Association of Zimbabwe, VaLovemore Makurirofa, vanoti mwedzi waGumiguru inguva yakakosha inopa mukana madzimai kuti azive zvekuita kana aching abatwa nechirwere, uye kuti akurumidze kunorapwa chirwere chisati chakomba.
VaMakurirofa vanoti ichokwadi kuti mishonga yekurapa gomarara repazamu inodhura zvakanyanya zvekuti veruzhinji havakwanisi kuwana mari iyi kuitira kuti varapwe.
VaMarurirofa vanoti hurumende inofanira kuita homwe yemari yakanangana nedenda remagomarara ose sezvakaitwa pachirwere cheHIV/Aids.
Mukuru musangano reCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavhu, vari kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzui uno kuti vaende kumahofisi avo ari muna Livingstone Avenue muHarare kuti vazovhenekwa mazamu avo pasina muripo pamwe nekuwana dzidziso yezvechirwere ichi.
Amai Mavhu vanotiwo gomarara repazamu ndiro rechitatu pamagomarara ese anobata madzimai akawanda muZimbabwe.
Amai Mavhu vanoti paongororo yavakaita kutanga kwedzi waGumiguru, vakaona vakadzi nevarume vakati wandei vaine mapundu mumazamu airatidza kunge aive negomarara repazamu.
Mukuru weCancer Registry iri pachipatara cheParirenyatwa, iyo iri pasi pebazi rehutano, VaEric Chokunonga, vanoti chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika, uye vanhu vakawanda vanozoenda kunorapwa chirwere ichi chatokomba, izvo zvinozoita kuti vaitwe maoparesheni senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mumuviri wose.
Mutevedzeri wemukuru anoona nazvematenda asingatapuriranwe mubazi rehutano, Dr Justice Mudavanhu, vanoti magomarara epazamu neepamuromo wechibereko ndiwo ari kubata vanhu zvakanyanya.
Dr Mudavanhu vanoti magomarara aya anorapika kana munhu akakurumidza kuongororwa.
Ongororo yakaitwa nebazi rehutano inoratidza kuti vanhu zviuru zvishanu, vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore rega rega munyika, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu, vari kufa nechirwere ichi munyika pagore.